Labo Wiil oo lagu Dilay Suuqa Xoolaha ee Magaalada Muqdisho – idalenews.com
Labo Wiil oo lagu Dilay Suuqa Xoolaha ee Magaalada Muqdisho
Iyadoo ay soo badanaayaan dilalka qooleysata bistooladaha ku hubeyso ay geystaan, ayaa waxaa xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Huriwaa lagu toogtay laba wiil oo dhallinyaro ah, kuwaas oo aan la garanayn sababta loo dilay iyo cidda dilkooda ka dambeysa. Goobjoogayaal ku sugan xaafadda Suuqa Xoolaha ayaa saxaafadda sheegay inay dilkan geysteen saddex dhallinyaro ah oo bastoolado ku hubeysan, kuwaasoo markii ay dilka fuliyeen goobta ka baxsaday.
“Dilku wuxuu noola muuqday mid qorsheysan, ma garan karno cidda ka dambeysay, balse waxaa dilka geystay dhallinyaro bastoolado ku hubeysan,” ayay tiri qof dumar ah oo ka mid ah dadka deegaanka, iyadoo intaas ku dartay in ciidammo fara badan ay degmadaas yimaadeen dilka kaddib.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha AMSIOM ayaa sheegaya inay sugi doonaan ammaanka magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada ammaanka dowladdu ay xalay howgallo dad badan lagu soo qabqabtay ka billaabay degmooyin ka tirsan gobalka banaadir.
Xaflad balaaran oo lagu taageeraayo Madaxweyne Xasan oo ka dhacdey Minneapolis, Minnesota